Ọnọdụ COVID kachasị elu na -arị elu na Hawaii ka njem nlegharị anya na -aga n'ihu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ọnọdụ COVID kachasị elu na -arị elu na Hawaii ka njem nlegharị anya na -aga n'ihu
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Gọvanọ Hawaii David Ige na Lieutenant-Gọvanọ Josh Green
Njem nlegharị anya Hawaii na -aga n'ihu. Mgbe ị na -ejegharị n'okporo ụzọ Kalakaua dị na Waikiki ma ọ bụ na -azụ ahịa na Ala Moana Center ma ọ bụ na -egwu mmiri na Waikiki Beach, ị gaghị ama na Hawaii nwere ọnọdụ ahụike ahụike kacha njọ edere.
Ọtụtụ kpọrọ ya ihe ijuanya. Hawaii debara aha 622 COVID-19 ọhụrụ taa na ọnwụ atọ.
Naanị izu atọ gara aga, ọnụọgụ ọrịa ọhụrụ kwa ụbọchị si na 3 ruo 40 ruo 60 wee ruo ugbu a karịa 100. Ọnụ ọgụgụ kacha elu edere na steeti Hawaii bụ 600 na Ọgọst 307, 11.
Ihe ruru ndị ọbịa ụlọ US 30,000 na -abata na Aloha Kwupụta kwa ụbọchị, na -ahapụ ọtụtụ ụgbọ elu na -efe n'ike gaa na netwọkụ na -abawanye nke ụzọ ụgbọ elu ụlọ ọhụrụ.
The Ndị njem nleta Hawaii na Gọvanọ Hawaii Ige anaghị ekwu maka ụlọ ọrụ njem mgbe ọ na -akwado mmụba kachasị elu na ikpe COVID.
Otú ọ dị, Gọvanọ gwara eTurboNews:
Mgbochi ndị njem bụ maka ndị njem niile, ọ bụghị naanị ndị ọbịa, ọ naghị atụle mgbanwe ọ bụla na mmemme Njem Nchekwa n'oge a.
Nje virus na njem nlegharị anya na -abawanye na Hawaii.
Taa bụ, obi abụọ adịghị ya, mmụba kachasị elu na ọnụọgụ ọrịa ọ bụla, nke a na -atụkwa ụjọ.
Hotels na ụgbọ elu nwere ike; enweghi ohere ọ bụla maka akwa nhicha n'ime ájá n'ọtụtụ osimiri.
Site na ọnụ ọgụgụ na -abawanye kwa ụbọchị 100+, steeti ahụ abanyela na mkpọchi zuru oke otu afọ gara aga, mana ugbu a enwere ikpe 600+, a na -atụ anya na Gọvanọ Hawaii ga -ebuli ihe mgbochi niile fọdụrụ ozugbo ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ruru 70% nke ndị bi.
Gọvanọ Ige kwuru na nnọkọ ndị nta akụkọ taa, a na -atụ anya iru nọmba 70%+ na Septemba.
Hawaii gbanwere ụkpụrụ ya ka esi emeghachi omume na COVID-19 na ụdị ya site na ikpebi mgbochi ndị dabere na ọnụọgụ ikpe, dabere ugbu a na ọnụ ọgụgụ ndị ọgwụ mgbochi na steeti. N'ezie, ndị ọbịa 30,000 na -abata na Aloha Steeti enweghị mmetụta na nha ma ọ bụ ọnụọgụ a.
Dị ka Gọvanọ ahụ si kwuo, mmadụ isii n'ime mmadụ 6 gbara ọgwụ mgbochi ọrịa na-ebute ọrịa, ma e jiri ya tụnyere mmadụ 10,000 n'ime 300 ndị na-abụghị ọgwụ mgbochi.
Gọvanọ ahụ tụrụ aro ka onye ọ bụla gbaa ọgwụ mgbochi, nọrọ ebe dị anya 6 ụkwụ, ma yiri ihe mkpuchi ihu n'ime ụlọ.
Gọvanọ ahụ agaghị ekwu okwu eTurboNews ajụjụ gbasara ikekwe ịweghachi ihe mgbochi ndị ọzọ, nke gụnyere oke maka ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ndị ọbịa bịarutere, na usoro iwu.
Akụ na ụba na -emeri nchegbu ahụike COVID, na Hawaii na -eduga obodo ugbu a na ozi a, ebe oke mba ụwa ka na -emechi.
Elsie ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 1, 2021 na 14:15
Ooooh… na -atụ egwu! Anyị ga -ebi n'ụjọ! Ikpe abụghị ụlọ ọgwụ, ọnwụ 3 n'ime ọnụ ọgụgụ ihe karịrị nde 1.4 abụghị ọdachi. Ndi mmadụ 3 ahụ nwụrụ 'nke' covid ma ọ bụ nwụọ 'na' covid. Ibu oke na ị abuseụ ọgwụ ọjọọ juru ebe niile n'agwaetiti ndị a… kedu ọnọdụ dịbu adị ka ndị a nwere? Kwụsị ịtụ egwu!